Fumana indlela Amanani abalwa ngayo
Kwiimathematika, uza kubona ezininzi iingxelo malunga namanani. Amanani angahlelwa ngamaqela kwaye ekuqaleni oko kubonakala ngathi yinto ephazamisayo kodwa njengoko usebenza namanani kwimfundo yakho kwimathematika, ngokukhawuleza iya kuba yinto yesibini kuwe. Uyakuva imiqathango eyahlukeneyo ephonswa kuwe kwaye ngokukhawuleza uzakusebenzisa loo migaqo ngokuziqonda kakuhle. Ngokukhawuleza uza kubona ukuba ezinye iinombolo ziya kuba ngeqela eliqela.
Ngokomzekelo, inombolo yenani eliyinkunzi liphelele kunye nenani elipheleleyo. Nantsi ukuphazamiseka kwendlela esichaza ngayo amanani:
Inombolo yemvelo yintoni oyisebenzisayo xa ubala izinto enye. Unokuba ubala amapenki okanye amaqhosha okanye ikhukhi. Xa uqala ukusebenzisa i-1,2,3,4 njalo njalo, usebenzisa iinombolo zokubala okanye ubanike isihloko esifanelekileyo, usebenzisa iinombolo zemvelo.
Amanani onke alula ukukhumbula. Azingekho amaqhezu , azinjalo, aphela amanani apheleleyo. Into eyenzayo eyenza ihluke kunamanani angokwemvelo kukuba siquka i-zero xa sibhekisela kumanani onke. Nangona kunjalo, ezinye izibalo ziza kubandakanya i-zero kwinani lemvelo kwaye andiyi kuxoxisana nale ngongoma. Ndiya kwamkela zombini ukuba ingxoxo ecacileyo inikwe. Inani elipheleleyo li-1, 2, 3, 4, njalo njalo.
I-Integers ingaba ngamanani apheleleyo okanye ingaba ngamanani apheleleyo eneempawu ezimbi phambi kwazo.
Abantu bahlala bebhekisela kwii-integers njengeenombolo ezichanekileyo nezibi. I-Integers yi -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 njalo njalo.
Amanani anengqiqo anenani leenxalenye kunye nama-decimals. Ngoku unokubona ukuba amanani angabakho kwiqela elingaphantsi kweqela. Amanani anengqiqo angaphinda aphinde aphinde aphinde ahlawule okuza kubona oku kubhaliweyo njenga: 0.54444444 ...
okuthethi nje ukuphinda ngonaphakade, ngamanye amaxesha uza kubona umgca ogqitywe phezu kwendawo ephezulu echaza ukuphinda ngonaphakade, esikhundleni sokuba nenombolo ...., inombolo yokugqibela iya kuba nomgca ukhankanywe ngasentla.
Amanqaku angenangqiqo ayifaki i-integers OKANYE amaqhezu. Nangona kunjalo, iinombolo ezingenangqiqo zingaba nexabiso elidlulileyo eliqhubekayo ngonaphakade ngaphandle komzekelo, ngokungafani nomzekelo ongentla. Umzekelo wenani elingaziwayo elingaqondakaliyo yiyona pi njengoko sonke sikwaziyo yi-3.14 kodwa ukuba sijonge kakhulu, yile 3.14159265358979323846264338327950288419 ..... kwaye le nto iqhubeka malunga nendawo ejikeleze ama-5 trillion!
Nantsi enye inqanaba apho ezinye ezinye izigaba eziza kufakwa. Amanani anene aquka amanani enyama, iinombolo ezipheleleyo, iinombolo, iinombolo ezinengqiqo kunye namanani angenangqiqo. Inani langempela libandakanya iinxalenye zeqhekeza kunye namaxesha okugqibela.
Isishwankathelo, oku kuluhlu oluphambili lwenkqubo yokuhlelwa kwenani, njengoko uhambela kwizibalo eziphambili, uza kuhlangana namanani amaninzi. Ndiya kushiya loo manani anzima kwaye ayicinga.
Ukusebenzisa i-Percents - Ukubala iiKomishoni
Indlela Yokuba I-Archaeologist
10 Iimfazwe zeMfazwe
Ukubiza amaTaliyane amagama okugqibela
10 Iinkcukacha NgeDechecheirus, "Isandla esibuhlungu" iDinosaur
Iinkcukacha ze-Intanethi kunye neeRekhodi zoPhando kwi-British India
Ngaba kulunge ukuthenga i-EPIRB okanye i-PLB?